Amaxwebhu | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ziziphi iimpepha ezifunekayo ukungena kwi-Israel evela eRashiya?
Ngawaphi amaxwebhu ayimfuneko ukungena kwa-Israyeli esuka eRashiya? ipaspoti (esebenzayo ubuncinci iinyanga ezi-6) amatikiti okubuya nokubuya maxa wambi acele isatifikethi somvuzo kunye namanye amaxwebhu aqinisekisa ikopi yokundwendwela oye wabhabhela kuyo
Yintoni oyifunayo kwi-visa eSpeyin? kwaye kuthatha ixesha elingakanani ??
Ufuna ntoni i-visa ukuze uzuze ispain? kwaye ithatha ixesha elingakanani? Iveki kunye nobuncinci bamaxwebhu phambi kwabahlobo abalungileyo abanokuzilungiselela. Ipaspoti yamazwe aphesheya isebenze ubuncinci iinyanga ezintathu emva ...
Ndifuna ukubhala idilesi yam ngesiNgesi. Yintoni umyalelo wokubhala?
Ndifuna ukubhala idilesi yam ngesiNgesi. Uthini umyalelo wokubhala? Ummandla waseChelyabinsk. Isithili saseNagaybak. Ilali yaseFerschampenoise. oomatshini bezitrato indlu 38 yokuhlala 9. UBraer Yuri Andreevich. Ikhowudi yeposi 457650 Ilizwe, isixeko, ...
Ngaba ndifuna ipasipoti yohambo oluvela eMoscow ukuya eKaliningrad nangemva?
Ndidinga ipasipoti xa ndisuka eMoscow ndisiya eKaliningrad nasemva? iyamangalisa. Uhambo lwexesha elinye ngabemi baseRussia abangenayo i-visa yeRiphabhlikhi yaseLithuania, phakathi kommandla waseKaliningrad kunye nalo lonke elaseRashiya ...
Yintoni iMultivisa? Sele uphendulwe malunga ne-multivisa. Kwaye kuba abanye babhale ububhanxa obupheleleyo, ndiza kuyiphendula yonke imibuzo)) Okwethutyana ngokokubona koonozakuzaku abathile. ngamaxesha amaninzi…
Ngaba ndifuna ipasipoti yokungena eGeorgia?
Ndidinga ipasipoti yokungena eGeorgia? ... ufuna ... akalolungu le-CIS .. Ukungena eGeorgia, abemi baseRussia kangangexesha elingagqithanga kwiintsuku ezingama-90, i-visa ayifuneki. Xa uwela umda ...
Ziziphi iimpepha ezifunekayo ukuhamba ngesitimela ukuya eKaliningrad eMoscow nasemva?
Ngawaphi amaxwebhu afunekayo ukuhamba ngololiwe ukuya eKaliningrad eMoscow nasemva? uyintoni ndoda? ukuhamba usuka eRussia usiya eRashiya nditsho namanye amaxwebhu okuhamba? incwadana yokundwendwela…
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana ipasipoti emva kokutshintsha igama lam?
Lisebenza ixesha elingakanani ipasipoti emva kokutshintsha ifani? Kubonakala ngathi iyafana nepasipoti yaseRussia, malunga nenyanga inike ixesha lokutshintsha! Naye watshata ngaloo nyaka, watshintsha igama lakhe lokugqibela, kodwa ...
Yintoni i-e-tiketi? Yiyiphi ithikithi ye-e-konsathi, indlela yokuyifumana ngayo, yintoni okufuneka uyenze nayo emva koko?
Yintoni itikiti le-e? Yintoni itikiti elektroniki lokuya ekhonsathini, ungayifumana njani, kufuneka wenze ntoni ngalo kamva? Uhlawula itikiti lokuya ekhonsathini okanye kwintsebenzo nge-Intanethi. Emva koko yiza ...
Ziziphi iimpepha ezifunekayo ukufumana ipasipoti yomntwana omncinci
Ngawaphi amaxwebhu afunekayo ukufumana incwadana yokundwendwela yomntwana omncinci? Ungajonga njani kwiziza www.gosuslugi.ru okanye www.fms.ru Imithetho yanamhlanje yeRussian Federation inika umntwana omncinci ilungelo lokuba nepasipoti yakhe yokuhamba ngokuzimeleyo ukuya ...
Ndingayiqwalasela njani ukuba inkundla yenzelwe inkundla?
Ndingajonga njani ukuba ityala livulwe ngokuchasene nam? awukwazi…. yiya kwiCandelo leMicimbi yaNgaphakathi apho kwaye uyakufumanisa =)) ngubani owaziyo ukufumanisa ngegama lokugqibela ukuba ndiza kuba netyala. Ukuba…
Ngangaphi iiyure ukuthengiswa kweekitikhi zekhompyutha kwiwebhusayithi yomzila weloliwe?
ukususela nini ukuthengiswa kwamatikiti e-elektroniki kuqala kwiwebhusayithi kaloliwe yaseRussia? Ndavula isiza nge-7-40 ngexesha laseMoscow, yayingekabikho i-8 kodwa ukuthengisa amatikiti kwakusele kuqhubeka, kwaye kwakungekho matikiti aqhelekileyo ...
isiqithi esikhulu kunazo zonke ehlabathini
Esona siqithi sikhulu ehlabathini Iziqithi ezili-10 ezinkulu emhlabeni Iziqithi ezili-10 ezinkulu emhlabeni, ngokwe dekatop.com. Isiqithi yindawo yomhlaba yemvelaphi yendalo, ejikelezwe macala onke ...
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumana i-visa e-Italy?
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumana i-visa eya e-Itali? Ukulungiswa kweVisa ngoku kuya kuthatha iintsuku zokusebenza ezi-3 ukuba ubuqu ubuzimele kwindlu yozakuzo okanye kwindlu yozakuzo ngesimemo. Kodwa bathi ubuninzi ...
Ithetha ukuthini itikiti lokuhamba ngenqwelomoya elijikeleziweyo?
Ithetha ukuthini itikiti lokuhamba ngenqwelomoya elijikeleziweyo? Ukuba awazi ngokuthe ngqo ukuba uza kubuya nini, ke kungcono ukuthenga itikiti elinomhla wokubuya ovulekileyo. Vula ...
Ngaba ndiya kufuna ipasipoti ukuya eUkraine kunyaka we-2016
Ngaba ipasipoti iza kufuneka ukuya eUkraine ngo-2016? Ewe, abantu baseRussia bafuna ipasipoti yokungena eUkraine. Ukuhamba uye eUkraine, kufuneka incwadana yokundwendwela, kuba ekukhanyeni kwe ...
kwishedyuli yomsebenzi. ukubhaliswa kwepaspoti
iiyure zokuvula ze-vyborg ovir. ukubhaliswa kwepaspoti yelizwe langaphandle akusayiyo i-OVIR, kodwa yi-FMS. Tsalela umnxeba, ufumane: I-FMS yesithili saseVyborgsky saseVyborg, st. I-Travyanaya, 26 (81378) 508-11, 8- (813-78) -5-07-63 http://vbgcity.ru/?q=ru/node/3583 IMIMISELO YOMSEBENZI WABASEBENZI ...
Uneminyaka emingakanani amabathikithi enqanawa athengiswa ngawo kwaye malunga namanqanaba athile angabizi ngaphantsi kwabantu abadala?
Adala kangakanani amatikiti kaloliwe abantwana kwaye malunga neepesenti ezingakanani zitshiphu kunabantu abadala? Imithetho yokuthuthwa kwabantwana ngokwesiseko soMmiselo kaRhulumente waseRussia ngomhla we-2 Matshi 2005 111 "Kwi ...
Ukushicilela ithikithi ye-elektroniki ye-Aeroflot?
Uyiprinta njani itikiti le-eeroflot? Thumela ifayile yeAeroflot efunyenweyo kwi-PRINTER ... ngomyalelo ovela kwiofisi yakho ebhalisiweyo kwinkampani, okanye kwisepha ofumene kuyo isiqinisekiso sokuthengwa kwe-Intanethi .... ukuhlamba ...
Sawubona, Kuphi ukuhlawula iifizi zee-consular ze-visa zaseMelika?
Molo! Uphi ukuhlawula iifizi zommelisi waseMelika? Ukuhlawulwa kwemali ngebhanki Umenzi-sicelo ngamnye kufuneka ahlawule umrhumo welinye ilizwe kwisebe laseRaiffeisen Bank. Intlawulo yenziwa ngekheshi. Ebhankini kufuneka ugcwalise ...
Imibuzo ye-53 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,658.